आइपिओ भर्ने कि नभर्ने ? तिहारमा दुई कम्पनीको २८ लाख कित्ता आइपिओ निष्काशन हुने - Arthasansar
विहीबार, २० कार्तिक २०७७, १६ : ४२ मा प्रकाशित
सेयर बजारमा तिहारको विचमा दुई कम्पनीको साधारण सेयर (आइपिओ) निश्कासन हुने भएको छ । युनाईटेड इदी–मार्दी एण्ड आरबि हाइड्रोपावर लिमिटेड र युनाईटेड इदी–मार्दी एण्ड आरबि हाइड्रोपावर लिमिटेडको गरी २८ लाख ४१ हजार भन्दा बढी कित्ता आइपिओ निश्कासन हुने भएको हो । दुवै कम्पनी हाइड्रोपावर रहेका छन् ।
कुनको कति कित्ता ?
युनाईटेड इदी–मार्दी एण्ड आरबि हाइड्रोपावर लिमिटेडल कात्तिक २७ गतेबाट कम्पनीले दोस्रो चरणमा ८ लाख ७३ हजार ९१० कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको छ । कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको आइपीओमा सर्वसाधारणले छिटोमा कात्तिक २७ गतेदेखि मंसिर ३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् भने सो अवधिमा सबै शेयर बिक्री नभए ढिलोमा मंसिर ११ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ । आइपिओमा सर्वसाधारणले न्युनतम १० कित्तादेखि १० हजार कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
यसअघि कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्र कास्की जिल्लाका आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुकाको लागि ४ लाख २० हजार कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको थियो। सोमध्ये बिक्री नभएको २ लाख ४३ हजार ९१० कित्ता सहित कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।
कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि गराइएको क्रेडिट रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई ‘केयर एनपी डबल बी प्लस (आइएस)’ रेटिङ्ग प्राप्त गरेको छ ।
माउन्टेन इनर्जी नेपालले १९ करोड ६८ लाख २ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको रू एक सय अंकित दरले १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता साधारण शेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्न लागेको छ । उक्त शेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् ३९ हजर ३ सय ६१ कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् ९८ हजार ४ सय १ कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँड गरी बाँकि १८ लाख ३० हजार २ सय ६५ कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गरिनेछ ।
लगानी गरेका ६८ कम्पनी डुबे, म सधैं नाफामाः पुराना सेयर खेलाडी डमरूबल्लभकाे अनुभव । Damaru Ghimire